Template Design က အလန်းလေးနော်။ တွေ့တွေ့ချင်း ပြောင်းပြီးသုံးချင်စိတ်တောင်ပေါက်တယ်။ မနဲ စိတ်ထိန်းထားရတယ်။ ခဏခဏ ပြောင်းနေရင်လည်း တော်တော် သောက်မြင်ကတ်ကြတော့မှာ သူရဲ့ Template လေးကတော့ ညာဘက်မှာ sidebar နှစ်ခုပါလို့် Adsense ထည့်မည့်သူတွေအတွက် ပိုပြီး သင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် တစ်ခုကောင်းတာက Post Box က ဘယ်ဘက်မှာ ရှိတာပါပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စာဖတ်တယ်ဆိုတာ များသောအားဖြင့် မျက်လုံးက ညာဘက်ကနေစပြီး ဘယ်ဘက်ကိုသွားပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကစပြီး ညာဘက်ကိုကြည့်တာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။ ကျွန်တော့် Template ကျတော့ အလယ်ရောက်နေတယ် ဟိဟိ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။
Erudite 1.0 Beta Template ကို သူ့ရဲ့ blog မှာသွားပြီး Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ User Manual လည်း တစ်ခါတည်း ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် သုံးတဲ့ User အတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ Code တွေက XML Format မဟုတ်ပဲ microsoft word ထဲမှာ အကုန်ထည့်ထားတာပါ။ အဲဒီ Code တွေကို အကုန် Copy ကူးယူပြီး Edit HTML Box မှာ Paste လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ စိတ်တိုင်းကျ ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Tags: blogger template, beta template, beta blogger
ByN-181 12:36 am
ဒီဇိုင်းက တော်တော် သန့်တယ်ဖိုးချမ်းရေ။ ဒေါင်းလုပ်ပဲ လုပ်ထားလိုက်တော့မယ်။ ဖိုးချမ်းပြောသလို
ကိုဖြိုး 8:22 am
byn ... ဟုတ်ပ .. ဟိဟိ :D
ကိုဖြိုး ... ဘာတွေဖြစ်လို့လဲ .. ရပါတယ်ဗျ။ မရရင်လဲပြော မေးလ်ကိုပို့ပေးမယ် :)
Yan Aung 5:05 am
လန်တယ်. လန့်တယ်. လန်းတယ် ဗျာ.